Ny fisondrotan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic dia miverina any Espana | Fanavaozana maintso
Miverina any Espana ny fisondrotan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Tomàs Bigordà | | Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo avy amin'ny masoandro, Angovo azo havaozina
Ny renivohitry ny havaozina dia mitodika any amin'ny fanjakan'ny Espana mba hanao fampiasam-bola amin'ny angovo photovoltaic. Tsy toy ny 10 taona lasa, ny vola miditrao dia hiankina ifotony amin'ny tsena fa tsy izay fanapahan-kevitry ny minisiteran'ny angovo.
Mampalahelo fa nandrava ny filaminana ara-dalàna ao amin'ny firenena ny antoko malaza, ary natahotra ny mpampiasa vola izany. Raha ny marina dia niteraka a mijanona ao amin'ny firenena miaraka amin'ny masoandro bebe kokoa avy amin'ny eran'i Eropa rehetra.
Soa ihany, ny fanatsarana ny tsena sy ny marimaritra iraisana ara-politika Eoropeana nahatratra taorian'ny fifanarahana tany Paris dia nanintona ny fampiasam-bola ho an'i Espana mankany photovoltaic indray, izay miditra amin'ny fifangaroan'ny angovo zara raha manarona ny 3% amin'ny fangatahana amin'izao fotoana izao.
Miaraka amin'ny tombom-barotra tombanana eo anelanelan'ny 4% sy 7% amin'ny salanisa, ny tombotsoan'ny vola, banky, mpamorona indostrialy ary mpilalao antoka dia manomboka mamorona firoboroboana vaovao amin'ny angovo masoandro.
Ho hitantsika manaraka ireo fanalahidy manaraka:
1 Fampihenana ny vidin'ny photovoltaic amin'ny masoandro
2 Masoandro be azo atao
3 Ny decarbonization amin'ny ho avy
4 Ahenao ny antontan-taratasy sy ny tsy fahatokisan-tena tsy voafehy
4.1 PPA (Fifanarahana mividy herinaratra)
Fampihenana ny vidin'ny photovoltaic amin'ny masoandro
Ity no singa fototra ho an'ny fampisondrotana lehibe izay miaina an'ity teknolojia ity manerantany. Androany, ny takelaka photovoltaic dia mora volo folo heny noho ny tamin'ny folo taona lasa.
Midika izany fa ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic dia efa mifaninana nefa tsy mila fanampiana toy ny teo aloha. Raha ny marina, ny fandalinana farany an'ny masoivohon'ny angovo azo havaozina iraisam-pirenena (Irena) mampiseho ny fomba herinaratra vokarin'ny masoandro photovoltaic no iray lasa mora indrindra amin'ny haitao azo havaozina rehetra.
Ny fihenan'ny vidim-piainana dia vokatry ny famokarana any Shina, izay saika novokarina 100% ny takelaka. Ny mpanolotsaina sasany manam-pahaizana manokana amin'ity sehatra ity dia mampitandrina fa tsy maintsy raisina ny kajikajin'ny sinoa afaka manomboka miha lafo izy ireo ny vidin'ny takelaka nomena azy ireo fa tsy manana fifaninanana lehibe manerantany.
Masoandro be azo atao
Antony iray hafa manapa-kevitra raha ny amin'ny filokana amin'ny Espana no fahaizana ananan'ity faritany ity, nomena ny loharanon-karena ambony masoandro. Raha ny marina dia ny firenena any Eropa no manana taratra tara-masoandro betsaka indrindra. Manararaotra izany ny firenena hitrandrahana ny fizahantany. Mampalahelo fa tsy ampiasaina firy ny herin'ny angovo. Raha jerena ny angona dia napetraka tany Espana tamin'ny faran'ny 2017 izy ireo 4.675 MW herin'ny photovoltaic, raha any Alemana kosa, izay manana loharanom-bolan'ny masoandro dia lava volo ary manana fanitarana tany mitovy amin'izany, dia efa mihoatra ny 40.000 MW no miasa.
Ny decarbonization amin'ny ho avy
Antony iray hafa manan-danja hiloka amin'ny fanavaozana ny haavon'ny compromiso azon'ny Vondron Eropeana tamin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fanaparitahana ny toetrandro.
Io dia manery ny fampitsaharana ny fandefasana entam-barotra amin'ny 2050 ary izany dia mitaky fiakarana mazava amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny fanavaozana. Izany no antony anaovan'ny firenena mpikambana lavanty hametrahana ireo haitao ireo izay mamela azy ireo hihaona amin'ny quota. Hihaona amin'ny Fifanarahana Paris nosoniavina tamin'ny 2015, manondro ny fanamafisana ny toekarena.
Izany dia mahatonga ny maro hieritreritra fa hitombo be ny filan'ny herinaratra amin'ny taona ho avy. Porofon'izany ny filokana tapa-kevitra ataon'ny orinasa maro fiara fiara elektrika.
Ahenao ny antontan-taratasy sy ny tsy fahatokisan-tena tsy voafehy
Ny angovo Photovoltaic dia voaporofo tamin'ny varotra farany azo havaozina fa afaka mifaninana tsy misy fanampiana ara-panjakana. Izany hoe, amin'ny vidin'ny tsena. Soa ihany ho an'ny kitapom-bolam-panjakana, mihena ny fiankinan-dohan'ny fitantanan-draharaha. Ahenao ny taratasy rehefa apetraka fotodrafitrasa vaovao, ary ny fanajana ny rafitra mifehy, dia hanampy betsaka hisarika ny fampanjariam-bola vaovao.
PPA (Fifanarahana mividy herinaratra)
Amin'ny maha-zava-baovao antsika dia manana vokatra fantatra amin'ny hoe PPA (Fifanarahana mividy herinaratra). Izy io dia fifanarahana maharitra eo amin'ny mpamokatra herinaratra izay mivarotra herinaratra amin'ny vidiny iray sy ny mpanjifa izay mividy azy. Zava-dehibe io vokatra io, satria tsy misy fanampiana avy amin'ny governemanta, ny banky sy ny vola dia manaiky ny hanome vola hampiasana ity PPA ity ho antoka, izay mamela ny fampandrosoana ivelan'ny lavanty farany sy ny karazana fanampiana.
Araka ny fanazavan'ny talen'ny jeneralin'ny fikambanana photovoltaic UNEF, José Donoso, "misy eo anelanelan'ny 1.000 MW sy 2.000 MW ivelan'ny 4.000 MW nomena tamin'ny lavanty izay novolavolaina ankehitriny miaraka amin'ny PPA na mivantana amin'ny vidin'ny tsena." Misy aza mpamatsy vola vonona mihevitra ny loza mety hitranga amin'ny fiovaovan'ny vola azo avy amin'ny tsenan'ny ambongadiny, izay misy fiovan'ny toetr'andro.
Ny teboka iray lehibe manandanja ihany koa dia ny fahalianan'ny banky manavao ireo tetikasa ireo. Na izany aza, ny loza ateraky ny tsena sy ny traikefa ratsy taloha dia mahatonga azy ireo bebe kokoa Tsy mihataka rehefa mampiditra vola. Na izany aza, nanazava ny loharanom-baovao fa misy banky iraisam-pirenena miasa mavitrika kokoa ary hiady amin'ny Espaniola ihany koa.
Ny melon ny famokarana herinaratra izay teo am-pelatanan'ny 'fitaovana' lehibe dia hizara roa. Ny oligopoly famokarana dia tapaka. Raha ny tena izy, Vola fisotroan-dronono (Allianz, andrim-panjakana ao Hontario), an'ny renivohitra (Cerberus, KKR, Oaktree) na avy any fotodrafitrasa (GIP, Brookfield) ny vahiny dia miditra an-tsehatra amin'ny sehatra misy finiavana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Miverina any Espana ny fisondrotan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Gorona del Viento dia mahavita mamatsy havaozina 1.974 XNUMX ora
Tsara ny fanitarana ny tanjona azo havaozina any Eropa hatramin'ny 35%